R-4100 11 lbs Yakadzika Seat Rollators - Kufamba neMavhiri 6 Inch Mavhiri
Iyo Karman R-4100 Series Rollator inobatsira zvikuru inogona kudzivirirwa yekudonha rubatsiro yakagadzirirwa nechigaro chezasi chevanhu vanoda komputa uye isina kureruka kufamba kwemunhu rubatsiro. Yakareruka kupfuura mazhinji maviri-mavhiri anofamba ane mapaundi gumi nerimwe chete, ichi chakasimba uye chakavimbika chinotenderera chinopa iko nyore kwaunoda pamutengo wausingakwanise kupfuura. Iyi 11 Wheel Rollator inoratidzira 4-casters ekusaremekedzwa kudzora pamusoro penzvimbo dzisina kuenzana, zvichiita kuti ive yakanaka zuva nezuva rollator yekushandisa zvese mukati nekunze. Ergonomic inobata uye loop loop mabhureki akaisirwa akajairwa, achipa akawedzera nyore uye nyaradzo kune vashandisi vasina kusimba kubata kana arthritis.
R-4100 - 11 lbs huwandu
SKU: R-4100 Category: Vanotenderera Tags: 4 mavhiri, 4100, r-4100
Burgundy kana Bhuruu Ruvara
Chigaro Pad Upamhi 15 padiki.
Chigaro Kureba 18.5 padiki.
Kureba Kumashure 19 padiki.
Chiremera Chechigadzirwa 11 lbs.
R-4100 - Mudiki rollator UPC #